Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir oo si ula kac ah u dilay Cabdiwaaxid Jibriil Afrax - Muqdisho Online
Home Wararka Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir oo si ula kac ah u dilay Cabdiwaaxid...
Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir oo si ula kac ah u dilay Cabdiwaaxid Jibriil Afrax
Xilli ay maanta xirnaayeen inta badan Waddooyinka Magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhacay gacan ka hadal dhex maray Askari ka tirsanaa Ciidamada Booliska Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo marxuum Cabdiwaaxid Jibriil Afrax.
Mid kamid ah askartii Booliska ee Maanta ku qornaa Isgoyska Taleex gaar ahaan agagaarka Maqaayadda Fatxi ayaa toogtay wiil dhallinyaro ah oo marayey jidka.
Wiilka la toogtay Cabdiwaaxid ayaa waxay isku gacan qaadeen mid kamid ah askartii ilaalada ka heysay jidka kadib markii uu Askariga baad la dhacay wiilkii dhallinyarada ahaa taasoo keentay in askarigii dhagax madax loogu dhufto isla markaasna Feer lala dhigo dhulka.
Cabdiwaxid Jibriil Afrax oo maanta aay ku dileen isgoyska Taleex ciidanka Booliska
Askariga la feeray oo dhulka yaalo qorigiisana uu dhinaca kale ku dhacay ayuu u qeyliyey mid kale oo ka tirsanaa askarta meesha kula qorneyd isagoo ka dalbaday inuu wiilka u qabto. Askarigii codsiga loo dirsaday ayaa xabad kor ugu riday wiilkii dhallinyarada ahaa si uu ugu yaraan u cabsado una istaago balse wiilkii ayaa ku adkeystay inuu sii cararo.
Markaas kadib askari kale oo ku sugnaa isla goobta una dhowaa halka uu wiilka ku cararayey ayaa xabad kaga dhuftay dhabarka dambe taasoo sababtay inay banaanka usoo baxdo Caloosha Cabdiwaaxid Jibriil Afrax.
Sida ay dadka goobjoogayaalka ahaa u xaqiijiyeen MOL, dhaawaca wiilkii yaraa oo aad u liitay ayaa loola cararay mid kamid ah Isbitaalada Muqdisho ku yaalo.
Sida aay u sheegeen MOL reerka uu ka dhashay Cabdiwaaxid Jibriil waxaa wiilkooda dilay ciidan uu watay sarkaal ka tirsan booliska oo magaciisa aay ku sheegeen Farxaan Qaaroole. Waxayna dalbadeen in si dhaqsa ah caddaalada loo horkeeno, iyagoo diiday in la duugo meydka Cabdiwaaxid Jirbriil Afrax.
Farxaan Qaaroole iyo ciidankiisa oo ka mid ahaa kuwii dilay Cabdiwaaxid Jibriil Afrax
Ciidamada Dowladda ayaa shacabka u geysto dhibaato xooggan marka ay xiran yihiin jidadka Muqdisho, wuxuuna falkaan toogashada ahaa kusoo aadayaa xilli Maanta jidka Shaqaalaha muddo 30 daqiiqo loo diidanaa Gawaari waday meyd.
Ciidamada Booliska ee joogay isgoyska Shaqaalaha ayaa xabado nool nool ku ridayey gawaarida meydka waday inkastoo markii dambe uu meesha soo gaaray taliye Booliska ka tirsan kaasoo fasaxay meydka.
Hey’adaha Amniga weli ma aysan ka hadlin falkaan naxdinta leh ee ka dhacay Isgoyska Taleex ee Magaalada Muqdisho, waxaana u suurta gashay askartii falka geystay inay isaga baxsadaan goobta ay wax ka dhaceyn .
Waddooyinka Muqdisho ayaa hadda kusoo laabatay sidii caadiga aheyd waxaana dib u furmay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
Tan iyo markii uu Madaxweyne dalka ka noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa yaraaday askarta la geynayo tiirka ee dilalka u geysto dadka Shacabka ah, waxayna taas keentay inay soo bataan toogashada dadka shacabka ah.
Inaan la toogan dadka sida kaska ah qof kale u dilo ayaa loo sababeeyaa inuu Madaxweyne Farmaajo saxiixin maadaama uu heysto dhalasho dalka Mareykanka ah taasna uu ku muteysan karo dacwad maxkamadeed.
Previous articleShirkii Xildhibaanada Beelaha Habargedir ee Muqadishu maxaa ka soo baxay?
Next articleMaamulka Hirshabeelle oo ka hadlay coolada kasoo cusboonaatay Gobolka Shabeelaha Dhexe